Lahatsoratra nataon'i Chad Crowe momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chad Crowe
Nanatevin-daharana i Chad Crowe Techwood Consulting tamin'ny 2016 ho ampahany amin'ny fampitambarana. Amin'izao fotoana izao dia mitantana ny fampiharana sy ny fitantanana kaonty Techwood izy. Manana mari-pahaizana bakalorea avy amin'ny Oniversite Reinhardt izy ary mari-pahaizana Master avy amin'ny Oniversite Troy amin'ny serasera. Nandritra ny taona maro, Chad dia nitantana $ 25 tapitrisa dolara tamin'ny dokam-barotra fikarohana karama.
Techwood Consulting dia natsangana tamin'ny taona 2008 ary consultant nomerika elit izay manana fahaiza-manao fototra amin'ny fikarohana organika sy karama. Mpikambana Inc5000 ho an'ny 2017, manana foibe any Atlanta, GA, miaraka amina ekipa 17 manohana mpanjifa 60, Techwood dia manana laza tsara amin'ny famonoana kalitao ao anatin'ny faritra misy ny lohahevitra SEO sy PPC.
Inona no dikan'ny fanavaozana ny doka mihodina vaovao an'ny Google amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny AdWords?
Talata, Septambra 19, 2017 Talata, Septambra 19, 2017 Chad Crowe
Google dia mitovy dika amin'ny fanovana. Ka mety tsy nahagaga raha ny 29 Aogositra lasa teo, nanakodia fanovana hafa ny tranokala fanaovana dokambarotra an-tserasera, miaraka amin'ny fihodinan'ny doka. Ny tena fanontaniana dia - inona no dikan'ity fanovana vaovao ity ho anao, ny teti-bolanao ary ny fahombiazan'ny doka nataonao? Google dia tsy tokony hanome antsipiriany amin'ny antsipiriany rehefa manova izany izy ireo, ka mamela orinasa maro hahatsapa ao anaty haizina toy ny ahoana